Assistant Finance & Account Manager | Job in Myanmar ﻿
16.10.2018, Full time , Insurance / Pensions
Company: First National Insurance Public Co., Ltd.
First National InsuranceFirst National Insurance (FNI) was established in 2012. WithaStrong management team and insurance professional on board, FNI has set out to become the largest insurance provider in both the life and nonlife insurance industries.
•	Computer, MYOB Software အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
•	စာရင်းပိုင်းလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ၊ လုပ်ငန်းပိုင်းတိကျသေချာမှုရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	B.Com ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
•	အသက် ၂၈ မှ ၃၅ နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၄) နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	LCCI Level III, CPA (or) ACCA အောင်မြင်ထားသူ
Work location အမှတ်(၄၀၀/၄၀၆)၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။
Job Function: Assistant Finance & Account Manager
•	Software များတပ်ဆင်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာနှင့်သက်ဆိုင်သော Error များကို ကောင်းမွန်စွာဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။ •	Windows &, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Window 10, Microsoft Office နှင့်အခြား IT နှင့်ပတ်သက်သော Software များကို ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်� ...
First National Insurance (FNI) was established in 2012. WithaStrong management team and insurance professional on board, FNI has set out to become the largest insurance provider in both the life and nonlife insurance industries.
•	Computer, MYOB Software အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	စာရင်းပိုင်းလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ၊ လုပ်ငန်းပိုင်းတိကျသေချာမှုရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ၊ ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။
•	Computer, MYOB Software အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	စာရင်းပိုင်းလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ၊ လုပ်ငန်းပိုင်းတိကျသေချာမှုရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းသူဖြစ်ရမည်။
Assistant Finance & Account Manager Financial Management Jobs jobless Jobsinyangon First National Insurance Public Co., Ltd. Financial Management Jobs Financial Management Jobs Assistant Finance & Account Manager Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Key Account Executive – Custom Clearance